အတတ်ပညာ China Harley ဆိုင်ကယ် လေကာမှန် ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူ |Shentuo
လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဆိုင်ကယ်မော်ဒယ်-Harley ဗိုလ်ချုပ်
Harley မော်တော်ဆိုင်ကယ်လေကာမှန်သည် ဆိုင်ကယ်မော်ဒယ်များအတွက် Harley General ဖြစ်သည်။
လေကာမှန်သည် သွက်လက်သော ဒိုင်းနမစ်များ၊ လှပသောအသွင်အပြင်နှင့် ခိုင်ခံ့သောလက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်မှုတို့ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။IBX ပါ၀င်သော လေကာမှန်သည် သင်၏နောက်ခရီးစဉ်ကို ပိုမိုပျော်ရွှင်စေမည်ဖြစ်သည်။
1. စီးနင်းသူ၏ကိုယ်ထည်၏ လေတိုက်နှုန်းကို လျှော့ချရန် ဆိုင်ကယ်လေကာမှန်ကို တပ်ဆင်ပါ။
2. သင်၏ ခရီးဝေးခရီးကို ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပြီး၊ မတူညီသော ခရီးသွားအတွေ့အကြုံအသစ်ကို ဖန်တီးပါ။
3. PMMA ပစ္စည်းသည် မျက်နှာပြင်တစ်ခုစီကို ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည့် သက်ရောက်မှုမြင့်မားသော acrylic ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ပစ္စည်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှု၊ အပူခံနိုင်ရည်နှင့် ကောင်းမွန်သောကြာရှည်ခံမှုရှိပြီး သံချေးတက်ခြင်းနှင့် လျှပ်ကာများပါရှိသည်။
4. ဆိုင်ကယ်လေကာမှန်၏ အထူသည် တုန်ခါမှုကို အရှိန်မြင့်စွာ စုပ်ယူနိုင်ပြီး ကွဲအက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခြစ်ရာများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ပြီးပြည့်စုံသော လေကာမှန်သည် သင့်စတိုင်နှင့် လိုက်ဖက်သည်၊ ပိုလုံခြုံပြီး ပိုသက်တောင့်သက်သာရှိသည်။
၎င်းသည် လေကို ပိုမို ဘက်ပြန်စေပြီး ယာဉ်မောင်းအား သက်တောင့်သက်သာ နှင့် ဘေးကင်းသော မောင်းနှင်မှု အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းသည်။
လေကာမှန်မပါဘဲ ဦးခေါင်း၊ ရင်ဘတ်နှင့် နောက်ကျောတို့သည် လေပြင်းဒဏ်ခံနိုင်ပြီး ၎င်းတို့အား လေအေးဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
လေကာမှန်များဖြင့်၊ လေ၏ 70% ကို အအေးဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
IBX မော်တော်ဆိုင်ကယ်လေကာမှန်ကို စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ အမှတ်တံဆိပ်ကို အသားပေးဖော်ပြခြင်း၊ အလွှာပေါင်းစုံကာကွယ်ခြင်း၊ ဝတ်ဆင်ခြင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊
ဤနယ်ပယ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်ယုံကြည်နိုင်သော ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။မင်းကိုအပ်ထားတဲ့ ငါ့အစွမ်းကုန်လုပ်။ကျွမ်းကျင်သောဝန်ဆောင်မှု၊ အရည်အသွေးအာမခံချက်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မော်တော်ဆိုင်ကယ်လေကာမှန်စီးရီးများနှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ရောင်းချခြင်းတွင် အထူးပြုပါသည်။အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်မျိုးစုံကို ဝယ်ယူသူများအား ပေးဆောင်ပါ။
IBX သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အမှတ်တံဆိပ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံအများအပြားတွင် ကျော်ကြားသော ဂုဏ်သတင်းကို နှစ်သက်ပါသည်။
ယခင်- Harley Dyna ဆိုင်ကယ်လေကာမှန်
နောက်တစ်ခု: ဆိုင်ကယ် universal လေကာမှန်
Harley Davidson ဆိုင်ကယ်လေကာမှန်များ
Harley Dyna Windshield
Harley Dyna ဆိုင်ကယ်လေကာမှန်
ဆိုင်ကယ် Rack ကျောင်းလွယ်အိတ်, Peugeot Django ကျောင်းလွယ်အိတ် Rack, ဆိုင်ကယ် Rack Bag, ဆိုင်ကယ်လမ်းနင်း, ဆိုင်ကယ်ခြေနင်း Clutch Pedal, ဆိုင်ကယ် ဂက်စ်နင်း,